Uthando: ikhemistri, iimvakalelo?
Ngaba wake wazibuza ukuba uthando luhlala phi? Okanye mhlawumbi unaphakade? Mhlawumbi kukho "i-shelf life" ethile? Ukuba kunjalo, ndingayandisa njani? Sizakuzama ukufumana iimpendulo kule mibuzo neminye.
Sisithini igama elithi uthando? I-Chemistry okanye umsebenzi? Ngo-Ukrainian, unokwahlula ezi ngcamango. "I-Ljubov" ngumsebenzi, kwaye "kohannya" yi-chemistry. Kwezinye iilwimi zehlabathi, ezi ngcamango zombini zichongiwe ngelizwi elilodwa. Ukususela kwingcamango yolwimi, uthando luya kuthiwa nantoni na. Sinokuthi sithande into, umsebenzi, umntu, ilizwe. Kodwa xa sithi "uthando" ngomntu, eli gama lithatha umthunzi ohlukileyo. Lo mthunzi uqhotyoshelwe kumxholo ohambelana nalo gama. Akunjalo nje umongo. Ilizwi leli lizwi linikezwa ngegama, ukugubha kwethu, ukuziphatha kwethu ngexesha lokuthi "Ndiyamthanda" ngomntu othile. Zibuze: Zingaphi kangangoko ebomini obuthandayo ngokwenene? Kakade, ngentliziyo yethu sonke sithanda kuphela kanye ngexesha lokuphila. Ngamanye amaxesha kwenzeka oku kwenzeka kabini ebomini bam.
Yintoni efana nayo?
Ngokuqinisekileyo, abaninzi abantu bacinga ukuba ekuqaleni, uthando kufuneka ukuba lube luthando. Akusoloko kulula ukuzimisela ukuba ngaba le ntliziyo ivela - isakhe imveliso. Ekuqaleni, asinakubona umntu oza kuba yinto ebaluleke kakhulu kwaye esondele kuyo. Kwenzeka, kwaye ngokulandelelana, indoda evelelekayo ebonakalayo eyenza umboniso ukususela ekuqaleni ingabakho i-pacifier. Kwaye kubonakala ngathi kufuneka sivuyiswe kukuba sinomfana onjalo. Kodwa akayi kuzisa uvuyo ngaphezu kwencwadi malunga nomsebenzi weofisi.
Kungabonakala kungaqhelekanga, kodwa abazithandayo abakhulu (abaphathi) yibo abade bevela kwiinjongo zobuhle. Yingakho kufuneka ufumane imansans. Nika ithuba kulabo abangabhenkceli kwiphepha le-magazines eligciniweyo kwaye baqhubela khona. Uya kumangaliswa, kodwa kuyamnandi. Yaye ukuba usichitha ixesha lakho lokuzikhethela wena kunye nabathandekayo bakho - yonke into iya kuba ngcono. Kwaye oko kusenokuthiwa ngumsebenzi. Abanye bangavumelani, kodwa yonke into ekulungele ukuhlala iyamangalisa.
Ikhempi yokuqala, sebenze
Kuthiwa ukuba yizi-enzyme eziveliswa kuphela okokuqala ngeveki ezimbini zobudlelwane. Xa kuphela ukuwa othandweni. Kancinci, ukuxhaswa ngokukhawuleza, uthando lukhula luba luhlobo olulinganisiweyo. Kwaye emva kwayo yonke into iya kuba ngumkhwa. Kuvela kule ndawo apho umsebenzi wethu uqala khona. Yintoni enokuyenza yintoni i-chemistry eyasinika yona? Ungayilondoloza njani kwaye yintoni na? Ngokuqinisekileyo, wonke umntu uzikhethela injongo. Omnye uphupha umtshato oqaqambileyo kunye nesitampu esiya kuma ipaspoti. Kule meko, ngokupheleleyo ngaphandle kokucinga malunga nento eya kwenzeka emva komtshato. Kukho abo babheka yonke into ngokunyanisekileyo: uthenge indlu kunye nemoto, ngoku ndiyakwazi ukuphumla. Umntu akanakulibala ukuzaliseka komntu oyedwa. Baceba ukuhlala iminyaka emininzi ngokukhetha kwabo: bacinga ukuhamba, malunga nokuqala isilwanyana. Kwaye ke abantwana babo nabazukulu baya esikolweni.
I sebenza njani.
Ukuba ucinga ngako, i-chemistry ayiyiyo kuphela into ebangelisayo beniyeserdtsa ukusuka kumgca wokuqala. I-Chemistry ibandakanya phantse zonke iindidi zokukhohlisa nokukhohlisa. Iquka yonke into ngaphandle kokoma kwesondo. Isifiso asikho i-chemistry, kodwa isilwanyana esisigxina esingunaphakade. Enye into, xa uthanda ukuyidla, yinto ayidlayo. Funda iincwadi ezifanayo njengoko akwenzileyo. Jonga ii-movie ezibukeleyo. Xa uqala ukusebenzisa indlela yakhe yokucinga.
Sihlala sidibana nabantu kwaye simangaliswe ngendlela abafana ngayo nathi. Yaye ukuba sibona ukungafani, siyaqiniseka ukuba ukuchasene kunokwakheka komnye. Kodwa asimele sikhohlwe ngokufihlakeleyo emehlweni ethu. Xa wena kunye neqabane lakho nifana kakhulu, kufuneka uqaphele ngokungena kwindawo yayo. Yaye xa uhlukile, awukwazi ukulibala ukuhlukahluka kwezinto ezithandayo. Ukuba uthanda ukuthoba phantsi kwelanga elunxwemeni, akufanele ucinge ukuba uyayithanda, naye. Ukuqwalasela ukuba ngokwenene uthanda ukuhamba ehlathini. Kule meko, idibeneyo ihambahamba malunga nomzi ifanelekile kuwe.
Xa uchasene nomnye nomnye, umsebenzi oza kuba ngowamaqabane xa i-chemistry iphela ukusebenza. Imfihlelo yomsebenzi ophumeleleyo kunye nolwalamano oluhle ekunyamezelweni. Simele siqonde ukuba omnye unelungelo lokuphila. Oku kufuneka kukhunjulwe rhoqo xa ikhupha. Uthando lwenu lufanele lube nobambiswano kunye nokuncedisana. Ewe, ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba omnye uyayithanda, kwaye enye ikuvumela ukuba uyithande. Kwaye ukuze ulondoloze le "chemistry", zama ukujonga umntu osondeleyo kwaye uyathandeka kuwe ngokujonga okutsha. Ulonwaba kukuba ubona into entsha kumlingane. Enyanisweni yokuba uyayixabisa nangona uvuyo oluncinane.
Iindlela ezili-10 zokuphula ubuhlobo
Ukupheka kweengulube zeengulube - i-Russian efanayo ne-American steak steak
I-Aqua aerobics kubafazi abakhulelweyo: ukuchasene
Izindlela ezifanelekileyo zokufunda ekhaya
Inkathazo isitayela sase-Azerbaijani
Iikhabomate ze-tsokotle ngeebhola zekhadi
Unokukunceda njani umzimba obuthathaka
Ungakulibala njani ngokunyaniseka kwaye uqale ubomi obutsha
Ziziphi iifistula kwaye zivela phi?